Ukuvuselelwa Kwemboni yeCannabis nge-Grown In - Brad Spirrison Covers Trends
Brad Spirrison we Ukhule phakathi usijoyine ukuxoxa ngezinkambiso zemboni ye-cannabis. Intatheli kanye nomsunguli weGrown In, uBrad Spirrison ukhuluma nathi ngezombusazwe zaseChicago nekusasa le-cannabis e-Illinois.
Yilalele kuPodCast noma ubuke i-YouTube Ukuvuselelwa Kwemboni ye-Cannabis nge-Grown In.
ISIQONDISO ESIQALILE: Izingqinamba ezi-5 zeCannabis ze-2020
ISIQONDISO ESIQALILE: Izisongo ezi-5 ezinkulu kuMkhakha weCannabis
Yiziphi izibuyekezo zakamuva zeCannabis Imboni?
Amalayisense e-Illinois yindaba yezindaba ezichazwe ku Izibalo ze-BLS lapho amalayisense angama-75 eza ngendlela eya emahhovisi asemthethweni we-Illinois cannabis. Amakhulu abafakizicelo alinde ukuthola ilayisense, kanti ama-dispensaries alinde ukuvulwa.
Abantu abafaka izicelo kanye nokulingana kwezenhlalo bathinteka kakhulu yimithetho emisha esifundazweni sase-Illinois. NgoMashi, lapho umthetho wemithetho ye-cannabis ufika eqophelweni eliphezulu, izinto eziningi zazingafakwa emthethweni, futhi lezi zinguquko zachaza amacala abasebenzisi be-cannabis ngendlela ekhetha kakhulu. Lezi zinguquko zengeza ubukhulu obusha embonweni we-cannabis e-Illinois.
Uhlelo lokushayela izindiza oluphathelene nokuthola amalayisense e-Illinois luthi amalayisense abakhiqizi bezentela abangama-40 kuphela ahlelelwe ukuthola abasebenza kuwo e-Illinois. Kusho ukuthini lokhu kuma-dispensaries esizayo? Ngabe inani lezimvume lanele ukubhekela isidingo esikhulu phakathi kwabafakizicelo?
Kusele ukubona ukuthi abaphathi bazozixazulula izingqinamba ngenani lamalayisense akhishwa unyaka nonyaka, ikakhulukazi uma sazi ukuthi abafaka izicelo zamalayisense kufanele bahlelele kakhulu kunakwamanye amazwe uma bafuna ukuvula i-dispensary. Izikhalazo okumele zivulwe zidinga ngaphezu kwezinyanga ezinhlanu zokulungiselela, futhi inqubo ejwayelekile kumele ithathe amasonto amathathu kuphela.
Lolu hlobo lokubambezeleka kwezilayisense lungashintsha kanjani izimiso? Sizobona ukuthi lezi zimo zizokhiqiza kanjani amalayisense amaningi uma kukhona abazobe bekhona lapho kuphela unyaka.
Amathrendi Kwimboni yeCannabis
Ekhuluma izibuyekezo zemboni ye-cannabis nezitayela, siphawula ukuthi ukunyakaza kwamasiko munye kungawushintsha kanjani wonke imboni. Ukuqala njengomsebenzisi wokuzijabulisa kwensangu, uBrad wakhuthazeka ukuba aqale inkampani eseyamukelwa njengenhlangano enegunya elingagunyaziwe ngokubika ngemikhuba yezimboni ze-cannabis. Ubuye futhi achaze ukuthi i-e-learning ingasebenza kanjani embonini.
Ukufunda nokufundisa kwabantu abadala kungamaphuzu ayinhloko lapho ukufunda online kungathola ingxenye enkulu yokunakwa kusuka kubasebenzisi be-cannabis. Izifundo abantu abangazifunda kulamamojuli we-e-learning ahlelwe kahle kakhulu ngokuya ngokuthanda komuntu ngamunye. Abakhiqizi, ama processor, kanye nama-trendsetter embonini ye-cannabis baqoqelwa ndawonye entweni efanayo: ukuletha umphumela obonakalayo owenza imboni yakamuva ye-cannabis.
Ikhono ongalithola lapha lisisiza ukuthi senze indlela evulekile kakhudlwana ekuthambekeni kwemboni ye-hemp. Embonini ye-cannabis e-Illinois, sidinga indawo yokubona uhlangothi lwebhizinisi lwendlela yesimanje yamathuba webhizinisi. Uma umuntu engabona ithuba lokuphakamisa imboni ngokuqhubekayo, kungaba igxathu elikhulu phambili ekuphakamisweni ngokuphelele kwekhono lemboni ye-cannabis.
Amathrendi Ezimboni zeCannabis Ayashintsha Kakhulu
Wonke umuntu o eza embonini kukhona ukuqhathanisa isiko le-cannabis manje nangezikhathi ezithile. Amathrendi amaningi we-cannabis abedumile kuma-'90s awasebenzi namhlanje. Uyini umehluko wangempela?
Ukujongwa kwebhizinisi kushintshe kakhulu. Namuhla, sibona abanikazi bamabhizinisi abasebenzisa amasu wesimanje ukwethula i-cannabis ezilalelini ezibanzi. Ngasikhathi sinye, siyaqonda ukubaluleka kwemfundo embonini ye-cannabis, lapho abantu bangafunda khona ama-metric kanye nezisekelo zezinzuzo ze-cannabis.
Uhlelo lwesikole luhlukaniswe ngamazinga amabili ahlukene akhomba ukusetshenziswa kolwazi okusebenzayo. Zombili izinhlangothi zohlelo zikhetha ngokuya ngobuchwepheshe bokuncintisana obungenakusetshenziswa ezimweni zangempela. Abafundi bafundiswe kakhudlwana ngokuxazulula izinkinga ngendlela ebonakalayo, kodwa hhayi ezingeni lethiyori, elingashiyi thuba lokucabanga okudala.
Imboni ye-cannabis ingayithola kanjani indawo kulolu hlobo lohlelo lwemfundo?
Kungaba khona ngokusebenzisa amazinga embonini angakhuthaza ukulingana kwezenhlalo nokulingana kuzo zonke izifundazwe kulo lonke izwe. Le ndlela ingenzeka kuphela uma abasebenzisi be-cannabis bekhuluma izingqondo zabo ngezindaba kanye nezinkambiso zezimboni ze-hemp ezingatholakala kumasayithi wemidiya ahlukene. ICannabis ishintsha izinkambiso zomphakathi, futhi kubalulekile ukulandela ukukhula komkhakha kwezimboni.
Siyakhumbula lapho i-cannabis kwakuyindaba yokubandlululwa ngendlela yokubandlulula okunonya kubasebenzisi be-cannabis. Kulezi zinsuku, insangu kuyindlela efakazelwe yokwelapha izimo zempilo ezahlukahlukene ezingeke zelashwe ngokuphumelelayo nangezinye izindlela zokwelapha.
Uma imibono ethile ngomkhiqizo emakethe ingaguqula lokho kushesha, singabikezela nje lokho abezindaba abangakwenza ukukhuthaza izinzuzo ze-cannabis ezitholakala cishe kuwo wonke umthwalo we-cannabis ngaphansi kweLanga. Ake sibheke okuningi mayelana nokubuyekezwa kwemboni ye-cannabis Ukhule phakathi futhi uhlole izindaba zakamuva.
Ngasikhathi sinye, uma ufuna ukukhuthaza ibhizinisi lakho, futhi uthole imininingwane yamuva emikhakheni yezimboni ze-cannabis, zizwe ukhululekile ukuxhumana nommeli wemboni ye-cannabis owaziwa kakhulu, uTom Howard.